Ciidamada Puntland oo la sheegayo iney qasaaro weyn u geeysteen Atem dagaal ka dhacay Galgala.
Posted by admin on May 11 2011 16:31:09
Punland:(hiranstate.com)- Warar isa soo taraya ayaa sheegaya in qasaaro lixaad leh loo geystay ururka Shabaab dagaal ay maanta kula galeen degaanka Galgala ciidamda Puntland iyo Atem oo la sheegayo inuu ku dhuumaaleysanayo dhulka buuraleyda ah.
Galgala:-Dagaal loogu aarayey OSaama Bin Laden oo ay aroortii hore ee saakay soo qaadeen ciidamo daacad u ah ururweynaha Alqacida kuwooda ku sugan Somaliya oo uu hogaaminayey Col Atem ayaa dagaal ku soo qaday ciidamada Puntland ee saldhigoodu yahay Galgala.
Warar xaqiiqda u dhaw ayaa shegaya in dagaalku uu hada qaboobay kedib markii looga itaal roonaaday ciidamadii Atem oo hub culus oo sida la sheegay casri ah lagu garaacay. ciidanka dagaalka soo qaaday oo ay dadka deegaanka ku qiyaaseen ilaa 300 oo siweyn u hubeysnaa ayaa lagu soo waramayaa in ay ku jabeen dagaalka hase ahaatee warar aan sugneyn ayaa sheegaya iney walito difaac kaka jiraan buurta Galgala iyo agagaarkeeda.
Inta badan degaanada lagu dagalamayo ayaa lagu soo waramayaa iney xireen ciidamada Puntland oo sida la sheegay u dagaalamaya hab ciidan iyagoo amarka ka qaadanaya taliska dhexe ee cidamada Puntland oo ah halka ay ka baxayaan amarada iyo qidada dagaalka. Alqacida iyo Shabaab oo sheegay iney u aari doonaan hogaamiyahii ururka oo ay dhawaantan dowlada Mareykanka ku dileen dalkaasi Bakistaan iyadoo lagu dhuftay labo xabadood oo midna wadnaha looga dhuftay halka mida kale madaxa looga dhuftay kediba uu madaxii qarxay oo xitaa la waayey si loo tusiyo aduunka intiisa kale sawiradiisa.
Kedibna ay ku hanjabeen iney u aari doonaan Osaama sidaasina dagaalka maanta dhacay uu qeyb kaka yahay duulaano badan oo is xig xiga oo ay Shabaab iyo Alqacida ka wadaan wadamo ay Somaliya ku jirto. dhinaca kale sir ay dhawaantan dowlada Mareykanka ka heleen gurigii ay ku dileen OSaama ayaa lagu ogaaday in ay 2 ka mid ah hogaamiyaasha Alqacida ku sugan yahiin Somaliya waxaana laga yaabaa in dowlad goboleedka Puntland ay arintaan ka caawiyaan Mareykanka cidamada ka jooga Badweynta Hindiya si ay kooxahaan ku dhuumaaleysanaya dhulka buuraleyda ah cirka ugu rusheeyaan.
La soco waraarkeena danbe.